ငါသာလျှင် ငါ့ဘလော့ဂ်ရဲ့ အရှင်သခင်: 2012/02
အခုတလော NLD နဲ့ဆိုင်တဲ့ စတစ်ကာတွေ ပါးမှာကပ်တာ ခေတ်စားနေတယ်။
ဒီပုံလေးကို Time ရဲ့ ဒီတပတ် အကောင်းဆုံးဓာတ်ပုံကဏ္ဍထဲမှာ တွေ့လို့ ကူးခဲ့လိုက်တယ်။
ဒီလ ၁၇ ရက် ဒေါ်စုရဲ့ ဖျာပုံခရီးစဉ်မှာ စိုးသန်းဝင်း AFP ရိုက်ထားတဲ့ပုံလို့ ဆိုတယ်။
Soe Than Win—AFP / Getty Images
Feb. 17, 2012. A child waits for the arrival of Myanmar democracy leader Aung San Suu Kyi in Pyar Pon, Myanmar.
ဥရောပလွှတ်တော်မှာ ကလေးတယောက် မဲပေးနေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူ့မဲကို ရေတွက်ခြင်း မပြုပါဘူး တဲ့။
ဖေဖော်ဝါရီ ၁၅ ရက်နေ့က ပြင်သစ်နိုင်ငံ အရှေ့ပိုင်း Strasbourg မြို့မှာရှိတဲ့ ဥရောပလွှတ်တော်မှာပါ။
Reuters ရဲ့ ပုံစာမှာတော့ အင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ Italy's Member of the European Parliament Licia Ronzulli, top center, takes part with her daughter inavoting session at the European Parliament in Strasbourg, France. လို့ ရေးထားပါတယ်။
မိခင်တွေ လုပ်ငန်းခွင်ထဲ ကလေးခေါ်ထားခွင့်ရှိရမယ်လို့ ဥရောပ ပါလီမန်က ပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်။
ဒီအခွင့်အရေးကို အပြည့်အ၀ အသုံးချသူကတော့ အီတလီနိုင်ငံက နိုင်ငံရေးသမား Licia Ronzulli ဖြစ်ပါတယ်။
သူက ဟိုတုန်းက သူနာပြု၊ နောက်တော့ ဆေးရုံမှာ အရာရှိ၊ အခုတော့ နိုင်ငံရေးသမား ဖြစ်နေပါပြီ။
လွှတ်တော်ထဲရောက်ရင် ကလေးက သူ့အလုပ် သူလုပ်ပါတယ်။ ဂူဂဲလ်မှာတွေ့ရတဲ့ပုံတွေအရဆိုရင် သူ့အလုပ်က အိပ်မယ်၊ ဆော့မယ်၊ ထောက်ခံမယ်၊ ကန့်ကွက်မယ်ပေါ့။
ဂူဂဲလ်မှာ Licia Ronzulli ဓာတ်ပုံတွေကို ရှာတော့ အခုလို တွေ့ရပါတယ်။
Licia Ronzulli က တခါတရံ သူ့ကလေးကို လွှတ်တော်ထဲ ခေါ်လာတတ်တာပါ။
ကလေးထိန်း ခွင့်ယူတဲ့အခါ၊ သူ့ခင်ပွန်း မအားလပ်တဲ့အခါမျိုးမှာပေါ့။
သူ့ကို ကမ္ဘာတလွှားက အမျိုးသမီး အများအပြား၊ အထူးသဖြင့် မိခင်အများအပြားက အားကျနေကြပါတယ်။
(ဓာတ်ပုံများ - Kham / Reuters)
ဟနွိုင်မြို့ Viet My အလှပြင်ဆိုင်မှာ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၃ ရက်နေ့က မျက်နှာရွှေသွင်းနေတာပါ။
မျက်နှာပေါင်းတင်တာတော့ လူသိများပေမယ့် မျက်နှာကို ရွှေသွင်း၊ ပုလဲသွင်း၊ ရေညှိပေါင်း၊ ဂျပန်ရွံ့စေးပေါင်း၊ အဆိပ်ထုတ်၊ ဂျီးချွတ်၊ ဆားဝက်ခြံစုတ် ဆိုတာတော့ လူသိနည်းကြမယ် ထင်ပါရဲ့။ လူသိနည်းပေမယ့် မြန်မာပြည်က မြို့ကြီးတွေမှာ ဒီလိုဝန်ဆောင်မှုတွေ ရှိနေပါပြီ။ ဘယ်နိုင်ငံတွေက ရောက်လာတဲ့ ၀န်ဆောင်နည်း၊ ငွေရှာနည်းတွေလည်း မသိပါ။
မျက်နှာတခုတည်း နည်းမျိုးစုံ ပြုပြင် ဆေးကြောတာမဟုတ်ပါ။
ဆံပင်၊ မျက်ခုံး၊ မျက်တောင်၊ ခြေ၊ လက်၊ လက်သည်းတို့အတွက်လည်း နည်းနာမျိုးစုံ အလှဆင်နေကြပါတယ်။
မျက်နှာရွှေသွင်းတဲ့အကြောင်း ပြန်ဆက်ရရင် အီဂျစ်ဘုရင်မ ကလီယိုပါထရာလည်း ဒီနည်းနာ သုံးခဲ့တယ်လို့ ဆိုတယ်။
ဒီနေ့ခေတ် ဆေးပညာရှင်များကတော့ မျက်နှာရွှေသွင်းတာကို အားမပေးကြပါဘူး။ အရေပြား ဒုက္ခပေးမယ့် သက်ရောက်မှုတွေ ရှိတယ်လို့ သတိပေးနေကြတယ်။
နုပျို အရွယ်တင်ဖို့ ရွှေတခါသွင်းရင် မြန်မာပြည်မှာ ဘယ်လောက် ယူတယ် မသိပါ၊ ပုံမှာပါတဲ့ဆိုင်ကတော့ ဒေါ်လာ ၉၀ နီးပါး ယူတယ်လို့ ဆိုတယ်။
မြန်မာထောက်လှမ်းရေး ဓာတ်ပုံရိုက်နည်း ပြောင်းလဲ
ဟောဒါက ၂၀၀၈ မတ်လ ၂၇ ရက်နေ့က ဓာတ်ပုံ။
NLD ရုံးရှေ့မှာ ရိုက်ထားတာ။
ဒီပုံမှာ ရုံးရဲ့ မျက်နှာချင်းဆိုင်က ထောက်လှမ်းရေးတပ်ဖွဲ့အသီးသီးက သတင်းယူသူ၊ ဓာတ်ပုံရိုက်သူတွေကို တွေ့နိုင်ပါတယ်။
အခမ်းအနားလုပ်တဲ့နေ့တွေဆိုရင် ရုံးရှေ့မှာ လူတွေ အရမ်းများတယ်။ ရုံးထဲလူမဆံ့လို့ ရုံးရှေ့ထွက်ထိုင် ထွက်ရပ်နေကြတာကြောင့်ပါ။ အဲဒီလို အခြေအနေ ဆိုရင် တချို့ထောက်လှမ်းရေးတွေက ကားလမ်းကူးလာပြီး ရုံးရှေ့အထိ လာတယ်။ ဓာတ်ပုံရိုက်သူကို ဘေးကနေ ကပ်ပြီး လုံခြုံရေးပေး၊ ညွှန်ကြားတဲ့သူ ရှိတယ်။ ဘယ်နားကိုရိုက်၊ ဟိုလူ့ကိုရိုက် ဒီလူ့ကိုရိုက် စသဖြင့်။
အခမ်းအနား မရှိတဲ့နေ့တွေ ဆိုရင် ရုံးက ခြောက်ကပ်ကပ်။
အဲဒီတုန်းကလည်း ၀င်ထွက်သွားလာသူကို ဓာတ်ပုံလှမ်းရိုက်ကြတာပဲ။
ပုံအနေအထား ကောင်းကောင်း ရဖို့အတွက် ဓာတ်ပုံဆရာဘေးက ထောက်လှမ်းရေးတယောက်က လက်ခုပ် လှမ်းတီးတတ်တယ်။ အသံလာရာဘက်ကို ကြည့်လိုက်တာနဲ့ ဟိုဆရာက ကင်မရာခလုတ်နှိပ်ပြီးသား။
နိုင်ငံခြားသားတယောက် NLD ရုံးထဲ ၀င်ပြီဟေ့ ဆိုရင်တော့ ထောက်လှမ်းရေးတွေ ပြာယာခပ်တော့တာပဲ။
အဲဒီ လူရဲ့ ပုံကို အဆက်မပြတ် ရိုက်ကြရော။ သံတမန် ဆိုရင်တော့ ကားနဲ့ ကားနံပတ်ကို မှတ်တမ်းတင်ထားလိုက်တယ်။ ဒါဆို သူတို့အလုပ် ပြီးလောက်ပြီ။
နိုင်ငံခြားသားက သံတမန် မဟုတ်ဘူး၊ သံရုံးကားနဲ့ မလာဘူး ဆိုရင် သူတို့ ပို အလုပ်ရှုပ်တယ်။
အဲဒီလူ NLD ရုံးကနေ အဲဒီလူ ထွက်ပြီ ဆိုရင် နောက်က တကောက်ကောက် လိုက်ကြတာပဲ။ ဓာတ်ပုံတခုတည်းနဲ့ အလုပ်မဖြစ်တော့ဘူး၊ ဒီလူက ဘာလဲ၊ ဘယ်မှာတည်းသလဲ ဆိုတာ လိုက်ကြည့်ကြရ၊ ပုံစံပေးကြရတယ် (ဖမ်းပြီး လေဆိပ်ပို့၊ အစောဆုံးလေယာဉ်နဲ့ ရန်ကုန်ကနေ ကန်ထုတ်လိုက်တာမျိုး)လို့ ယူဆရတယ်။
ဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့ပညာ အထူးသဖြင့် ခပ်ဝေးဝေးက လှုပ်ရှားနေသူတယောက်ရဲ့ ပုံကောင်းကောင်းရအောင် ရိုက်တဲ့ ပညာက လူတိုင်း မတတ်လေတော့ သူတို့လည်း အလုပ်ဖြစ်မယ့်ဓာတ်ပုံဆရာတွေ ငှားပြီး ရိုက်ခိုင်းကြတာလည်း ရှိတယ်။
ရုံးထဲကို ဘယ်သူ ၀င်ထွက်သွားလာတယ်ဆိုတာကို အထက်ကို တင်ပြဖို့အလုပ်က သူတို့ အလုပ်ပဲ ဆိုတော့ ဓာတ်ပုံရရေး နည်းမျိုးစုံ ကြိုးစားကြတယ်။ နည်းမျိုးစုံနဲ့ ရိုက်ကြတယ်။
ဒီနေ့ကာလမှာတော့ အသွင်ပြောင်းသွားတယ်။ NLD ရုံးရှေ့မှာ ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီဆိုရင် အဲဒီလို မရိုက်တော့ဘူး။
NLD ရုံးဝန်းကျင်မှာက ထောက်လှမ်းရေးအရေအတွက်ထွက် သတင်းသမားအရေအတွက်က ပိုများသွားပြီ။
ဒီကနေ့ Ah Bayah/Facebook မှာ တွေ့ရတဲ့ ဓာတ်ပုံတွေအရ ဆိုရင် -
ဒါကြောင့် ပလက်ဖောင်းပေါ် မရပ်တော့ဘဲ ဆိုင်ထဲကနေပဲ ရိုက်တယ်။
ဆိုင်နံရံကို အပေါက်ဖောက်ပြီး ရိုက်တယ်။
ရိုက်တဲ့ ဓာတ်ပုံဆရာက ဒီလူ လို့ ဆိုတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ အပြောင်းအလဲတွေ ဖြစ်နေတော့ ထောက်လှမ်းရေးတွေလည်း အပြောင်းအလဲတွေ လုပ်နေရပြီပေါ့လေ။ ။